Andao isika hitory fahasoavana mora vidy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-01 mpandimby ny Magazine > Mitory fahasoavana mora ve isika?
Angamba ianao efa naheno hoe ny fahasoavana dia voalaza fa misy "tsy voafetra" na "mitaky fangatahana izany". Ireo izay manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka dia hihaona indraindray amin'ny olona izay miampanga azy ireo ho "fahasoavana mora", araka ny iantsoana azy ireo tsy misy dikany. Tena io no nitranga tamin'ny namako malala sy pasitera GCI, Tim Brassel. Voampanga ho nitory ho "fahasoavana mora" izy. Tiako ny fomba fihetsiny teo. Ny valiny dia hoe: "Tsia, tsy mitory fahasoavana mora aho fa tsara lavitra kokoa: fahasoavana maimaimpoana!"
Ny teny hoe fahasoavana mora dia avy amin'ny teolojia Dietrich Bonhoeffer, izay nampiasa azy tao amin'ny bokiny "Nachgabe" ary nalaza. Nampiasa izany izy mba hanamafisana fa rehefa miova fo sy mitondra fiainana vaovao ao amin'i Kristy ny olona dia mahazo fahasoavana tsy mendrika. Saingy raha tsy manana fiainana mandimby dia feno tsy tanteraka aminy ny fahafenoan'Andriamanitra - ilay olona avy eo dia miaina "fahasoavana mora" ihany.
Ny fifandimbiasan'ny Famindram-pon'ny Tompo
Mitaky fanekena an'i Jesosy sa maha-mpianatra ihany koa ve ny famonjena? Indrisy anefa fa ny fampianaran’i Bonhoeffer momba ny fahasoavana (anisan’izany ny fampiasana ny teny hoe fahasoavana mora) sy ny fifanakalozan-kevitra momba ny famonjena sy ny maha-mpianatra dia matetika no diso hevitra sy nampiasaina tamin’ny fomba diso. Izany dia mifandray voalohany indrindra amin'ny adihevitra naharitra am-polony taona izay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe ady hevitra momba ny famonjena ny Tompo.
Ny feo lehibe iray ao anatin'ity adihevitra ity, izay kalvinista fanta-daza dimy, dia mitazona hatrany fa ireo izay milaza fa ny fieken-keloka manokana ny finoana an'i Kristy dia ilaina amin'ny famonjena dia meloka amin'ny fisolokiana "fahasoavana mora". Araka ny fandresen-dahatra nataony dia ilaina ny famonjena ny fanaovana fanekena amin’ny finoana (fanekena an’i Jesosy ho Mpamonjy) sy ny fanaovana asa tsara amin’ny lafiny iray (amin’ny fankatoavana an’i Jesosy ho Tompo).
Ao anatin'ity adihevitra ity dia samy niady hevitra tsara ny roa tonta. Mino aho fa misy ny lesoka eo amin'ny fomba fijerin'ny andaniny roa na azo sorohina. Ny zava-dehibe voalohany dia ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny Ray fa tsy ny fomba fitondran-tenantsika amin'Andriamanitra. Raha jerena amin'ity resaka ity dia mazava fa Jesosy dia sady Tompo sy Mpamonjy ihany. Na ny andaniny roa dia hahatakatra bebe kokoa noho ny fanomezana fahasoavana izay tarihin'ny Fanahy Masina antsika handray anjara bebe kokoa amin'ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny Ray.
Amin’io fomba fijery mifantoka amin’ny Trinite Kristy io, dia samy hihevitra ny asa tsara ho toy ny tsy hahazoana famonjena (na zavatra tafahoatra), fa noforonina mba handeha ao amin’i Kristy ny andaniny sy ny ankilany (Efesiana). 2,10). Ho hitan’izy ireo koa fa tsy mendrika ny hanavotana antsika, ary tsy noho ny asantsika (anisan’izany ny fanekem-pinoana) fa noho ny asa sy ny finoana an’i Jesosy ho antsika (Efesiana). 2,8-9; Galatianina 2,20). Avy eo izy ireo dia mety hanatsoaka hevitra fa tsy misy na inona na inona azo atao ho an’ny famonjena na amin’ny fanampiana na amin’ny fitazonana izany. Nanazava toy izao i Charles Spurgeon, mpitory teny lehibe: “Raha tsy maintsy manindrona ny fitafian’ny famonjena antsika amin’ny tsindrona isika, dia ho simba tanteraka izany”.
Ny asan'i Jesôsy dia manome ny fahasoavany feno rehetra
Araka ny efa noresahintsika teo aloha tamin’ity andian-dahatsoratra momba ny fahasoavana ity, dia tokony hatoky bebe kokoa ny asan’i Jesosy (ny fahatokiany) noho ny ataontsika isika.Ny fampianarana fa ny famonjena dia tsy amin’ny alalan’ny asantsika fa tsy manafoana ny filazantsara fotsiny dia vokatry ny fahasoavan’Andriamanitra. Nanoratra toy izao i Karl Barth: “Tsy misy olona ho voavonjy amin’ny fanaovan’ny tena manokana, fa ny olon-drehetra kosa dia ho voavonjy amin’ny asan’Andriamanitra”.
Mampianatra antsika ny Soratra Masina fa izay mino an’i Jesosy dia “manana fiainana mandrakizay” (Jao 3,16; 36; 5,24) ary “hovonjena” (Romana 10,9). Misy andininy mamporisika antsika hanara-dia an’i Jesosy amin’ny fiainana vaovao ao aminy. Diso lalana ny fangatahana rehetra hanatonana an’Andriamanitra sy haniry hahazo ny fahasoavany, izay mampisaraka an’i Jesosy ho Mpamonjy sy Jesosy ho Tompo. Jesosy dia zava-misy tsy voazarazara, sady Mpamonjy no Tompo. Amin'ny maha-Mpanavotra azy dia Tompo ary amin'ny maha-Tompo azy no Mpanavotra. Sady tsy mahasoa no tsy mahasoa ny fiezahana hanapaka ity zava-misy ity ho sokajy roa. Raha manao izany ianao dia mamorona Kristianisma izay mizara ho kilasy roa ary mitarika ny mpikambana ao aminy hitsara hoe iza no Kristianina ary iza no tsy kristiana. Misy fironana hanasaraka ny tenantsika sy ny ataontsika hoe iza aho.
Ny fanavahana an’i Jesoa amin’ny asam-pamonjeny dia mifototra amin’ny fomba fijery ara-barotra (fahombiazana) momba ny famonjena izay manasaraka ny fanamarinana sy ny fanamasinana. Na izany aza, ny famonjena, izay amin’ny lafiny rehetra sy ny fahasoavana manontolo, dia momba ny fifandraisana amin’Andriamanitra izay mitondra mankany amin’ny fomba fiaina vaovao. Ny fahasoavan’Andriamanitra mahavonjy no manome antsika fanamarinana sy fanamasinana, satria Jesosy mihitsy, tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina, no tonga fanamarinana sy fanamasinana ho antsika (1. Korintiana 1,30).
Ny Mpamonjy mihitsy no fanomezana. Tafaray amin’i Jesosy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina isika, dia lasa mpiombona amin’izay rehetra ananany. Ny Testamenta Vaovao dia mamintina izany amin’ny fiantsoana antsika hoe “voahary vaovao” ao amin’i Kristy (2. Korintiana 5,17). Tsy misy na inona na inona afaka mampiseho izany fahasoavana izany ho mora, satria tsy misy na inona na inona mora vidy, na mifandray amin’i Jesosy izany na eo amin’ny fiainana izay iombonantsika Aminy. Ny zava-misy dia ny fifandraisana aminy dia miteraka fibebahana, miala amin’ny toetra taloha ary miditra amin’ny fomba fiaina vaovao. Ilay Andriamanitry ny fitiavana dia maniry ny hahatanterahan’izay tiany ary efa nanomana izany araka izany ao amin’i Jesosy. Ny fitiavana dia tonga lafatra, raha tsy izany dia tsy fitiavana. Hoy i Calvin taloha: “Lavorary ao amin’i Kristy ny famonjena antsika rehetra”.
Ny tsy fahazoana fahalalana momba ny fahasoavana ary miasa
Na dia mifantoka amin’ny karazana fifandraisana sy fifankahazoana marina aza ny fifantohana, ary ny amin’ny fanaovana asa tsara, dia misy ny sasany izay diso hevitra fa ilaina ny fandraisana anjara mitohy amin’ny alalan’ny asa tsara mba hahazoana antoka ny famonjena antsika. Ny ahiahin'izy ireo dia ny fifantohana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana irery ihany no fahazoan-dàlana hanota (ilay lohahevitra noresahiko tao amin'ny Fizarana 2). Ny maimaika momba io hevitra io dia ny hoe ny fahasoavana dia tsy manadino fotsiny ny vokatry ny fahotana. Io fomba fisainana diso io ihany koa dia mampisaraka ny fahasoavana amin’i Jesosy mihitsy, toy ny hoe ny fahasoavana no lohahevitry ny fifampiraharahana (fifakalozan-kevitra) izay azo zaraina ho asa ataon’ny tsirairay nefa tsy misy an’i Kristy. Raha ny zava-misy dia ny asa tsara no tena ifantohan’ny olona ka tsy mino intsony fa nanao izay rehetra ilaina hamonjena antsika i Jesosy. Lazaina diso fa nanomboka ny asa famonjena antsika fotsiny i Jesosy ary anjarantsika izao ny miantoka izany amin’ny fomba sasany amin’ny fitondran-tenantsika.
Ny kristiana izay nandray ny fahasoavana nomena maimaim-poana avy amin’Andriamanitra dia tsy mino fa izany dia nanome alalana azy ireo hanota - ny mifanohitra amin’izany aza. Nampangaina ho nitory be loatra momba ny fahasoavana i Paoly mba “hihamaro ny ota”. Tsy nahatonga azy hanova ny hafany anefa izany fiampangana izany. Fa kosa, niampanga ny mpiampanga azy ho nandika vilana ny hafany izy, ary vao mainka niezaka nanazava fa ny fahasoavana dia tsy fomba mety hanilihana ny fitsipika. Nanoratra i Paoly fa ny tanjon’ny fanompoany dia ny “hampiorina ny fankatoavana ny finoana.” ( Romana 1,5; 16,26).
Ny famonjena dia tsy azo raha tsy amin'ny alàlan'ny fahasoavana: asan'i Kristy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
Tena mankasitraka an'Andriamanitra isika amin'ny fandefasana ny Zanany amin'ny herin'ny Fanahy Masina hamonjy antsika, fa tsy hitsara antsika. Takatsika fa tsy misy fandraisana anjara amin'ny asa tsara dia mahatonga antsika ho masina na masina; raha izany dia tsy mila Mpanavotra isika. Na ny fanamafisana dia ny fankatoavana avy amin'ny finoana na amin'ny finoana miaraka amin'ny fankatoavana, tsy tokony hohamaivanintsika mihitsy ny fiankinan-doha amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. Efa nitsara sy nanameloka ny ota rehetra izy ary namela antsika mandrakizay - dia fanomezana ho azontsika raha mino sy matoky azy isika.
Ny finoan’i Jesosy sy ny asany - ny fahatokiany - no mahatonga ny famonjena antsika hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany. Mamindra amintsika ny fahamarinany (fanamarinana antsika) ary amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no anomezany antsika anjara amin’ny fiainany masina (ny fanamasinana antsika). Mandray ireo fanomezam-pahasoavana roa ireo amin’ny fomba iray ihany isika: amin’ny fametrahana ny fitokiantsika amin’i Jesosy. Izay nataon’i Kristy ho antsika dia ny Fanahy Masina ao anatintsika no manampy antsika hahatakatra sy hiaina mifanaraka amin’izany. Ny finoantsika dia mifototra amin’ny (tahaka ny ao amin’ny Filipiana 1,6 dia) «izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany koa». Raha misy tsy manana anjara amin’izay ataon’i Jesosy ao aminy, dia tsinontsinona ny fiekena ny finoany. Raha tokony hanaiky ny fahasoavan’Andriamanitra izy ireo, dia manohitra izany amin’ny fitakiana izany. Azo antoka fa te hiala amin’izany fahadisoana izany isika, ary tsy tokony ho latsaka ao anatin’ny hevi-diso ihany koa fa ny asantsika dia mitondra amin’ny fomba rehetra amin’ny famonjena antsika.